Tontolo fandefasana pejy tsy misy andro fifohana sigara - pejy fandokoana maimaim-poana
Andro fandokoana izao tontolo izao tsy misy sigara
Ankalazaina any amin'ny firenena maherin'ny 100 eran'izao tontolo izao ny Andron'ny ankizy ary fantatra koa amin'ny hoe Andro manerantany ho an'ny ankizy, Andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy na Andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy. Ary ity Andro Iraisam-pirenena ho an'ny ankizy ity dia ankalazaina isan-taona amin'ny 20 septambra.
Fa maninona ny Andron'ny ankizy indraindray dia atao in-droa isan-taona? Any amin'ny firenena sosialista, anisan'izany ny GDR, nankalazaina tamin'ny 1950 Jona ny Andron'ny Ankizy hatramin'ny 1, izay notazonina tany amin'ny faritra sasany any Alemana ary noho izany dia ankalazaina indroa aza ny Andron'ny ankizy any Alemana. Tsara ho an'ny ankizy. Amin'ny fipihana ny sary dia misokatra amin'ny endrika pdf ny modely:
Sary fandokoana izao tontolo izao tsy misy sigara amin'ny endrika lehibe
Manga - Ny zavakanto avy any Azia dia mandresy an'izao tontolo izao